बलिउड अभिनेत्रीहरु कसरी आकर्षक देखिन्छन् ? « गोर्खा आवाज
बलिउड अभिनेत्रीहरु कसरी आकर्षक देखिन्छन् ?
एजेन्सी । त्यसै पनि बलिउडका अभिनेत्रीहरु फेसनको सन्दर्भमा एक कदम अगाडि छन् । सार्वजनिक समारोहमा होस् अथवा फिल्मको पर्दामा नै किन नहोस्, उनीहरु प्रँयः सधैं फेसनेवल नै देखिन रुचाउँछन् । यहाँ हामी केही नयाँ तथा केही पुराना अभिनेत्रीहरुको फेसन तथा ब्युटी सेक्रेटको बारेमा चर्चा गर्दैछौं ।
अभिनेत्री पि्रयंका चोपडा स्टाइलिस देखिनका लागि प्राय वेस्टर्न पहिरन लगाउने बताउँछिन् । उनलाई सामान्य अवस्थामा क्याजुअल वेयर पनि मन पर्छ । यद्यपि, कुनै सार्वजनिक समारोहहरुमा जानु पर्‍यो भने उनी साडी लगाउन मन पराउँछिन् । उनलाई सेम्पेन कलरको साडी लगाउन मनपर्छ । वेस्टर्न वेयरमा भने उनलाई कालो रंग मनपर्छ । उनी प्रायः स्टिलेट्टो ब्रान्डाका जुत्ता तथा हिल लगाउँछिन् । अधिकांश आउटफिटका लागि ब्राण्डमा खासै ध्यान नदिने स्वभावकी पि्रयंकालाई पर्फूयम तथा घडी भने ब्रान्डेड नै मनपर्छ । उनी आफ्नो हृयाण्ड ब्यागमा हेयर ब्याण्ड, पर्स, मोबाइल, मेकअप किट तथा भिटामिन प्रायः छुटाउँदिनन् ।
एउटा छोराको आमा भैसकेकी अभिनेत्री करिना कपूर कम्मरमा लगाइने बेल्टीको ठूलो सौखिन हुन् । उनको घरको दराज डिजाइन-डिजाइनका बेल्टहरुले भरिएको छ । त्यसमा पनि फेन्सी बकल भएका बेल्टहरुको संख्या अत्यधिक छ । करिना लाई मेकअप तथा गरगहनाप्रति खासै रुची छैन । उनी प्रँयः आफूलाई आरामदायक हुने तथा राम्री र स्टाइलिस देखिने पहिरन लगाउन रुचाउँछिन् । उनलाई जाडो मौसममा डेनिमका ज्याकेट लगाउन मनपर्छ । उनलाई ट्राउजर पनि मनपर्ने पहिरन हो । उनी प्रँयः आफूलाई स्लिम देखाउनु पर्‍यो भने कालो रंगको ट्राउजर लगाउने बताउँछिन् ।
अभिनेत्री मलाइका अरोराको कुरा केही बेग्लै छ । उनका अनुसार उनी आफूलाई स्मार्ट बनाउनका लागि सधैं तनावरहित बस्न चाहान्छिन् । यदि भित्रबाटै तनावग्रस्त भयो भने त्यो आफ्नो अनुहारमा झल्किन्छ, मलाईका अनुसार त्यसैले सधैं भित्रैबाट खुशी हुन्छ, जसको प्रभाव तपाईंको अनुहारमा समेत स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।राती सुत्नुभन्दा अघि उनी आफ्नो अनुहार सफा पानीले धुन कहिले बिर्सिन्नन् । यो पनि उनको एउटा ब्यूटी सेक्रेट नै हो । उनी आफ्नो तैलीय छाला भएको अनुहारलाई सुन्दर बनाउन ओयल-पि|m मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्छिन् ।
उनी हप्ताको तीन दिन जीमखाना गएर प्रसस्त पसिना बगाउँछिन् । शरीरबाट जति धेरै पसिना बगायो, छाला त्यति सुन्दर हुने उनको बुझाइ छ । जीमबाहेक उनी आफूलाई स्मार्ट राख्न नियमित योगा समेत गर्छिन् । उनी जंक फुड सकेसम्म खान्नन् । बिहान उठ्ने बित्तिकै कागतीको रस र मह हालिएको तातो पानी पिउनको धेरै पुराना बानी हो, जुन आजसम्म जारी छ । फेसन र स्टाइलको प्रसंगमा मलाइका पछिल्लो पुस्ताका अभिनेत्रीहरुभन्दा एक कदम अघि छिन् । उनी बजारमा देखिने फेसन पछिल्लो ट्रेण्डहरुलाई फलो गरिरहिन्छन् । मिलेको शरीरका कारण उनी हरेक प्रकारका परिहनमा उत्तिकै स्टाइलिस देखिन्छिन् । उनलाई भने क्याजुअल वेयर लगाउन मनपर्छ ।
अभिनेत्री श्रद्धा कपूर पनि आफूलाई सहज हुने पहिरन लगाउन रुचाउँछिन् । प्रकृतिको नजिक रहेर आफू फेसनलाई फलो गर्ने उनको तर्क छ । उनलाई जिन्सका पहिरनहरु मनपर्छ । उनीसंग जिन्सका पहिरनको राम्रै कलेक्सन छ । उनी आफ्ना जिन्सका पहिरनहरु पुराना भए पनि त्यसलाई आफ्ना दराजबाट झिकेर फाल्न चाहान्नन् । हरेक पहिरनमा एउटा सानो ब्याग बोक्न नछाड्ने श्रद्धा आफ्नो शरीरलाई सुहाउने शैलीका पहिरनमात्र लगाउँछिन् । आफ्नो शरीरमा कुन पहिरन सुहाउँछ अथवा सुहाउँदैन भन्ने कुरा जान्नु अति नै आवश्यक हुने उनको बुझाइ छ ।